नायक प्रदीप ले यसरी देखाए आफ्नो बौद्दिक लेभल (भिडियो सहित) – An Online Entertainment News Portal
Homeblogनायक प्रदीप ले यसरी देखाए आफ्नो बौद्दिक लेभल (भिडियो सहित)
नायक प्रदीप ले यसरी देखाए आफ्नो बौद्दिक लेभल (भिडियो सहित)
September 15, 2017 Keshab Khadka blog, Entertainment, Event 0
पछील्लो समयमा निकै नै रुचाइएका, दर्शकको मनमा बस्न सफल भएका नायक प्रदीप खड्का चलचित्र ‘लिली बिली’ मा अनुबन्धित भएपछी एकाएक चर्चा चुलिएको छ । किन चुलियो त चर्चा ? किन बने त प्रदीप खड्का ट्रोल को सिकार ? केही दिन अघी दरबार मार्ग स्थित अन्नपूर्ण होटलमा पत्रकार सम्मेलन गरी चलचित्र लिली बिली को अफिसिअल अनाउन्स्मेन्ट गरिएको थियो ।
उक्त प्रोग्राममा नायक प्रदीप खड्का बडीगार्ड सहित आएका थिए यही कुराले ठुलै चर्चा पायो या भनुम बजारले गसिप को लागि नयाँ टपिक पायो । सोही कार्यक्रममा नायक प्रदीप लाई प्रश्न सोधिएको थियो, के तपाईंले बर्डीगार्ड लाई पैसा तिर्न सक्नुहुन्छ त ? जुन स्टार्डम तपाईंले देखाइराख्नुभाछ के तपाईंलाई लाग्छ म सही छु ?
नायक प्रदीप ले जवाफ यसरी दिए : स्टार्डम देखाएर हुने भए सबैले देखाउनुहुन्थ्यो, मलाई मेरो टिम ले बर्डिगार्ड प्रोभाईड गर्नुहुन्छ भने मैले नाइ भन्दिन मैले प्रोभाईड गर्नुस भनेको पनि होइन म जतिसक्दो धेरै पब्लिकमा जान चाहने मान्छे हो। मलाई पब्लिकले उठाको मन पर्छ बर्डिगार्ड हे छेकेको भन्दा पनि ।
प्रदीप ले यो स्तरको लजिकल आन्सर दिन्छन भन्ने सायद कसैलाई लागेको थिएन होला, तर उनले दिएको जवाफ ले सबैलाई चुप लगाइदियो । यो भन्दा अघीका दिन हरुमा बर्डीगार्ड नदेखिएका होईनन तर प्रदीप खड्का बर्डीगार्ड सँग आउँदा किन यती धेरै ट्रोल बने ?किन आलोचनाले भरिए सामाजिक सन्जालका भित्ता हरु ? दुइजाना डेब्यु नायिका हरुलाई पनि बर्डिगार्ड दियिएको थियो तर उनिहरु को कुरा किन चर्चामा आएन किन प्रदीप मात्रै मुछिए ?
धेरै जनालाई गलत लाग्यो त्यसरी प्रदीप कार्यक्रममा पुग्दा, तर किन गलत लाग्यो ? के हामी जहिले पछाडि नै खिचिने हो, कसैले प्रगती गर्दा साथ नदिने हो ? नेपालमा अहिलेसम्मकै बढी लगानी भएको अन्तर्रास्ट्रिय स्तरको चलचित्र सुरु हुन लागिराखेको छ, यसमा किन आपती जनाउदै छौ हामी ? नेपाली सिनेमा क्षेत्र को बिकास तिब्रगतीमा भईरहेको छ जसले हामी सबैलाई फाईदा पुग्छ । नेपाली चलचित्र को स्तर बढे न हाम्रो स्तर बढ्छ ।
कसैलाई तल देखाउदैमा हामी ठुलो भएको महसुस गर्छौ तर यो गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई । प्रदीप खड्का जस्तो शिक्षित अनी लगनसिल नायक पाउनु चलचित्र क्षेत्रको लागि फाईदाको कुरा हो । प्रदीप दु:ख गरेर आए यस्को मतलब उसले बर्डिगार्ड डिजर्भ गर्दैन ? कसैलाई गिराउन कसैको अधिकार छैन । आफुले पाएको अधिकारको सही ठाउँमा उपयोग गर्न जान्यो भने सबैको भलो हुन्छ ।